Somalia - Svenska Livräddningssällskapet
Hem > Olika språk > Somalia
Iskuulka Dabaasha ee SLS
Ku socota waalidiinta ardayda
Iskuulada dabaasha ee maanta waa ay ka duwan yihiin goorta aad adigu dabaasha baraneysey: hadda caruurtu in ka badan dabaasha ayay bartaan. Iskuulka dabaasha waxay hadda isku-midka yihiin badbaadada biyaha.
Tan kowaad ee canugaaga uu baran doono waa kal sooni ku qabida biyaha. Xirfadaha kalsoonida biyahay ay wehliso waxaa ka mid ah xifdinta miisaamidda, jihaynta iyo ku dhex sabbaynta biyaha. Xirfaddahan markii la barto oo kaliya ayaa dabaasha la baraa.
Iskuulka dabaasha, caruurta waxay bartaan sida biyaha dhexdiisa loogu dhaqmo, doonta loo fuulo iyo barafka loogu baxo. Tani waxay ugu yeernaa Dabaal, Doon iyo badbaada Barafka.
Caruurta waxay bartaan in mar kasta ay xirtaan jaakada-dabaasha goorta ay joogaan halka ay doonta ku soo xirato, ay carsaanyo dabanayaan, ay doon raacayaan, iwm.
Haddii lacala uu shil dhaco oo canuga biyaha uu ku dhaco waa in ay usii taagnaad qaab garab qabsi istaag ah oo uu gargaar sugaa. Taasi ayaa ah sababta labiska dabaasha aysan ugu jirin iskuulka dabaasha.
Hadda iskuulkeena kama jiro dabaasha quuska. Cilmi baarista dhowaan la sameeyey waxay muujineysaa in dabaasha quuska ay halis tahay.
Sidoo kale caruurta waxay baranayaan sida shaqsi biyo dhexdiisa ku dhibaateysan loo gargaaro. Waxay bartaan sida doonta badbaadada loogu tuuro qof biyaha dhexdiisa ku dhibeysan oo ay ayaga aysan ugu boodin oo wax u dhaxeeyo ayaga iyo qofka dhibaatada ku jiro. Tani waxaa loogu yeeraa “gacan u fidis”.
Caruurtu waxay bartaan sida loo waco lambarka gargaarka deg degga ee 112.
Barashada sida loo noqodo xariif Caddeed sidoo kale waa xirfad muhiim ah oo ay caruurta ay iskulka dabaasha ka baranayaan.
Xirfad cusub ee kasta wuxuu iskuulka dabaasha bixinayaa shahaado abaal-marin. Barashada waxay ka bilaabataa laylisyo ah kalsoonida biyaha la siiyo caruurta heer billowga ah. Kadibna heerka xirfadaha waxay ki sii kordheysaa dabaasha biyaha wajiga la aadiyo gacmaha la fidiyo, dhabar dabaasha iyo laylisyo nafbadbaadin si ay waalidiinta u dareemaan in caruurtooda ay amaan u yihiin goorta ay dabaasha u soo baxaan.
Caruurta oo dhan marka ay fasalka 5aad, ku jiraan waa in ay garanayaan sida loo dabaasho oo waa ay kari karaan haddii ay timaado xaalad deg deg ah ee biyaha dhexdiisa ama dibadiisaba ka dhacda. SLS waxay soo saartey Bronsboj (bronze buoy) ayaga oo kaashanaya Wakaalada Waxbarashada Qaran (National Education Egency) si loo cadeeyo manhajta waxa la iska doonaayo.
Ku soo dhowoow iskuulada dabaasha!